MIUI Stable, Developer, Ported, Global, China, Recovery, Fastboot ROMs များအကြောင်း | Than Dana
Home » General » MIUI Stable, Developer, Ported, Global, China, Recovery, Fastboot ROMs များအကြောင်း
In General, News On February 12, 2017
MIUI China ROM ကကောင်းတယ် (သို့မဟုတ်) MIUI Global ROM ကကောင်းတယ်။ ဘယ် ROM ကိုအသုံးပြု သင့်ပါသလဲ ?
MIUI Global ROM (MI)
*** ယခုပို့စ်အား PDF format ဖြင့်ရယူရန် ***
Topics: General Knowledge MIUI Q&A Xiaomi
Previous Post MIUI Update ကို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ? မိမိဖုန်းမှာ MIUI Latest Update ဘာကြောင့်မရတာလဲ?
Next Post Xiaomi ဟာသူ့ရဲ့ Xiaomi Devices တွေကို ဘာကြောင့် Bootloader Locked လုပ်ခဲ့တာလဲ ?